Ibhayisekile yeSixeko sombane, 700c Bike yeSixeko soMbane, iYurophu isiXeko seBhayisekile kwisiXeko - IMI
IJIANGSU IMI MALUNGA
Yasekwa ngonyaka ka-2013, Jiangsu Imi iye iminyaka engaphezu kwama-8 yamava kwimveliso kunye nokusasazwa iibhayisikile zombane. Njengenkampani, izabalazela umgangatho kwaye ifuna uphuhliso rhoqo, i-IMI iqhubeka nokutyala imali kwizibonelelo ezinxulumene nemveliso.
Ngo-Matshi ngo-2018, iNkampani ityale imali entsha ukuze ihlangane nokwandisa amandla emveliso.
Yasekwa ngonyaka ka-2013, Jiangsu Imi iye iminyaka engaphezu kwama-8 yamava kwimveliso kunye nokusasazwa iibhayisikile zombane.
Inkampani ye-IMI yenza umgangatho ophucukileyo weebhayisekile zombane zothutho olwenzelwe wena. Ngokusebenzisana ngokunzulu netekhnoloji yokusika, sinokubonelela ngebhayisekile yombane esefashonini kwihlabathi liphela. Siqinisekisa uzinzo lwetekhnoloji yethu entsha.
Umbono wethu kukuvelisa rhoqo kunye nokuhambisa imveliso ekumgangatho ophezulu ngokuhambelana nemigangatho yoBulunga, kunye nokuba liqabane elithandwayo kubathengi bethu.
IMVELISO ZETHU EZIBALULEKILEYO
Sinikezela uluhlu olubanzi lwebhayisekile yombane; ezinje ngebhayisekile yombane wedolophu, ibhayisekile yentaba yombane, ibhayisekile yomdyarho wombane, ibhayisekile yemithwalo yombane, ukusonga ibhayisekile yombane kunye nebhayisekile yombane njl.
I-ECOLITE ebike yenzelwe ukonwaba, ukungakhathali ngebhayisikile yasezidolophini kunye neempawu ezisemgangathweni kuyo yonke.
Iflethi yeNdlela ye-E-Bike
I-EWAY (ngoku kwisizukulwana sayo sesiThandathu) yibhayisekile yombane ecaleni kwoluhlu lwethu lweemodeli zebhayisekile zedolophu.
ISIXEKO E-BHAYISEKILE IMVELISO
Iibhayisikile zombane zandisa amandla akho okuseta kunye nokukwazi kwakho ukwenza kwaye ubone ngaphezulu. Iibhayisekile zeediliya zenza ukuba kwenzeke ngakumbi. Ziyakhawuleza kwaye zihamba kakuhle, kunye nokuqikelela, amandla alula wokulawula kunye nebhetri ehlala ishenxayo ehlaziya nakweyiphi na indawo ephuma kuyo.
Ukusonga i-E-Bike engu-48V
Inesantya esiphezulu seemayile ezili-12 ngeyure, inobunzima obumalunga neepawundi ezingama-20 kwaye ibaleka kwibhetri ye-lithium phosphate enokuhlawulwa ngokupheleleyo kwimizuzu engama-20. Isithuthi luhlobo olutsha lwebhayisikile yombane, ukudibanisa izinto ezimbini ezilungileyo zokusonga ibhayisikile kunye nebhayisekile yombane.
Ukusonga i-E-Bike engu-36V
Ibhayisekile yokusonga ebukekayo eneetoni zezincedisi ezitsha, iimoto ezihlaziyiweyo ezingama-350 zeewatthi, ezinamandla nezihlala ixesha elide ezingama-48v 10.4ah ibhetri, iziqhoboshi zediski.
Ukusonga i-E-Bike IMVELISO
Iibhayisikile ezisongelayo zombane ziyahluma kwizitrato zedolophu, koololiwe nakwiibhasi, nakwizakhiwo zeofisi nakwiipaseji zesizathu. Kunzima ukubetha lula ngebhayisekile ukuba i-origamis yehle ukuze ilingane phantsi kwedesika yakho-kodwa ingenza uhambo lwakho lukhawuleze kwaye lungarhafisi kangako. Ngakumbi nangakumbi iinkampani ziyaxakekisa ukwenza owona matshini wokuhamba. Nantsi into ekufuneka ujonge kuyo xa ufuna ibhayisekile edibeneyo yeentsuku zokuhamba zeemodemodal okanye ukugcina eflethini- kunye nokuhamba ixesha elide.
Isantya esi-7 se-E-Bike
Ibhayisekile yombane i-ELECTO yi-e-bhayisekile enamandla enemilo entle yesakhelo sombane. E-ibhayisekile Kulula kakhulu ukuba ukusebenza.
Isantya se-E-Bike esi-11
Ulawula umboniso weLCD ovumela ukuba uthathe isigqibo kwinqanaba lokufumana uncedo olufunekayo, okwenza iNdlela yeNdlela ilungele kungekuphela iflethi, kodwa kunye nembonakalo yelizwe eneenduli.
Intaba E-ibhayisekile IMVELISO
Iibhayisikile zeentaba zombane yiyo yonke into osele uyithanda malunga nokuhamba ngomkhondo, kodwa ngaphezulu kwayo. Isantya ngakumbi. Amandla angakumbi. Umgama ongaphezulu. Indawo engaphezulu. Kodwa oololiwe nangaphezulu koko — ibhayisekile yasentabeni yombane ekunika ubudlelwane obunomdla ngakumbi kunye nomkhondo. Iibhayisikile ezincedisa ngombane zandisa amandla akho okusonga ngelixa usandisa inani lokonwaba oya kuba nalo kwindlela. Yiya phambili, hamba ngokukhawuleza, kwaye uye kwiindawo ezininzi kwi-e-MTB. Ezi zeebhayisikile ezikuvumela ukuba uzonwabele ngakumbi kuyo yonke into eyenza ukuba ukuhamba ngeebhayisikile kube kuhle.
Injini ye-hub yangemuva engama-350w ekwaziyo ukuhambisa ibhayisekile yombane ngesantya ukuya kuthi ga kwi-30 km / h kumandla ombane acocekileyo5-7hours yexesha lokutshaja kunye noyilo olungena manzi yenza ukuba ibhayisekile yakho ihlale ilula.
Ibhayisikile yombane entsha ye-EFATI yenzelwe ukoyisa zonke iintlobo zetera, zombini zikhululekile kwiindlela ezilungiselelwe kunye nasezindleleni.
Ukutyeba ngebhayisekile IMVELISO
Amavili aphakamileyo akuvumela ukuba usebenze uxinzelelo lwamavili asezantsi, kunye noxinzelelo lwamavili asezantsi zihlala zikhwela ngokukhululeka. Amavili ebhayisekile athatha loo mbono ngokugqithileyo. Ngelixa ungaqhuba i-60 + psi kwibhayisikile yendlela, i-40 + psi ye-hybrid, kunye ne-20 + psi yebhayisikile yasentabeni, iibhayisekile ezityebileyo zikuvumela ukuba ukhwele kunye ne-psi ezintlanu ukuya kwezili-10 kumavili akho. Uya kufuna ukongeza uxinzelelo lwepavumente kwaye ususe umoya wokukhwela ngaphandle kwendlela, kodwa ukwehla okupheleleyo koxinzelelo lwamavili kuvumela amavili ukuba acinezele ngaphezulu kwamaqhuqhuva, alungelelanise ukukhwela kwakho.
26 intshi E-Bike
Ibhayisekile ehamba ngemithwalo enezixhobo zombane ezinezibane, izibane ezihlanganisiweyo, izibuko lokutshaja i-USB, kunye nomqolo omkhulu ongasemva oxwesileyo.
20 intshi E-Bike
Siyilele ukuba i-Escape ibe yibhayisekile yombane eguquguqukayo. Ukubaleka kuyinto eqhelekileyo kwiindawo ezahlukeneyo zemimandla, ukusuka ekuhambeni okungoyikiyo, kwiitraki zendlela ezihamba ecaleni kwendlela ukuya ekuzingeleni iindlela zomlilo phakathi kweewayini.
Imithwalo E-ibhayisekile IMVELISO
Imithwalo yeebhayisikile zothutho zixhotyiswe ngokupheleleyo ngee-bikes nge-fenders, izibane ezihlanganisiweyo, amazibuko okutshaja e-USB kunye nesakhelo esikhulu semisebenzi emininzi yangasemva. Ifakwe isakhelo esitsha esihlanganisiweyo sealuminium ingxubevange yesakhelo, inkxaso yabantwana, imithwalo, ufakelo lwebhasikithi.